यस ट्रिकको साथ एप्पल टिभी + को निःशुल्क वर्षको पदोन्नतिको फाइदा लिनुहोस् | आईफोन समाचार
हामी सबै खुसी थियौं केहि दिन अघि जब एप्पलले वर्षको नि: शुल्क पदोन्नति गर्ने निर्णय गरे जुलाई सम्म। हामीलाई थाहा छ कि प्रस्ताव संचयी होइन, र यदि तपाईं पहिले नै यसको आनन्द लिई रहनु भएको छ भने, तपाईं त्यसलाई विस्तार गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं नयाँ यन्त्र खरीद गर्नुहुन्छ भने। त्यो कुरा मैले गत हप्ता सम्म विश्वास गरें।
तर त्यहाँ मलाई एक युक्ति द्वारा व्याख्या गरिएको छ प्रतिभा पछिल्लो हप्ता "Machinist" एप्पल स्टोर बाट। मैले यसलाई अभ्यासमा राखिसकेको छु र एप्पल टिभी + लाई फेब्रुअरी २०२२ सम्म नि: शुल्क आनन्द लिन्छु ...
भ्यालेन्टाइन डे को लागी मैले मेरी श्रीमतीलाई नया आईप्याड दिएँ। उसको पहिले नै ब्याट्री समस्या थियो, त्यसैले मैले उसलाई एक gaveएप्पल ट्रेड इन। र मैले यसलाई चौथो जेनरेशन आईप्याड एयरको लागि नवीकरण गरेको छु।
म यसलाई बार्सिलोनाको «ला माक्विनिस्टा Apple को एप्पल स्टोरमा लिन गएँ, र मलाई भेट्ने मैत्री जेनियसले वर्णन गरे सानो चाल एप्पल टिभी + मा निःशुल्क वर्ष पदोन्नतिको लागि योग्य हुन।
मलाई आईप्याड हस्तान्तरण गरेर, उसले मलाई सम्झायो कि मसँग अधिकार छ एप्पल टिभी को एक नि: शुल्क वर्ष +। मैले उनलाई भने कि म यस प्रस्तावको फाइदा लिन सक्दिन, किनकि आईप्याड मेरी श्रीमतीको लागि थियो, कि हामी यसलाई "परिवारको रूपमा" हाम्रा उपकरणहरूमा एकीकृत गर्नेछौं र हामी जुलाई सम्म स्वतन्त्र वर्षको मजा लिइरहेका छौं।
र त्यसपछि उनले मलाई सोध्यो: तपाईं प्राय: एप्पल टिभी कहाँ हेर्नुहुन्छ? र मैले जवाफ दिएँ कि यो भान्छाको एप्पल टिभीमा थियो, र बैठक कोठामा टिभीमा। र संसारमा सबै प्राकृतिकता संग उनले जवाफ दिए: «ठिक छ नयाँ एप्पल आईडी सिर्जना गर्नुहोस् नयाँ आईप्याडको साथ। एप्पल टिभी + को नि: शुल्क वर्ष सक्रिय गर्नुहोस्, यसलाई पुन: कन्फिगर गर्न तपाईंको महिलालाई रिसेट गर्नुहोस्, र नयाँ एप्पल आईडी प्रयोग गर्नुहोस् भान्छामा र बैठक कोठामा सिर्जना गरिएको »।
मेरो आँखा ठूलो भयो, र एक ठूलो मुस्कान संग म दयालु जीनियस धन्यवाद। मसँग पहिले नै एप्पल टिभी + फ्रि छ 14 2022 को फेब्रुअरी भान्छाकोठामा एप्पल टिभी र बैठक कोठामा सामसु TV टिभी अनुप्रयोगमा।
एप्पल आईडी सिर्जना गर्न धेरै सरल छ। तपाईंलाई केवल ईमेल खाता चाहिन्छ।
प्रक्रिया धेरै सरल छ। यदि तपाईं आईप्याड, आईफोन, आईपड टच, एप्पल टिभी वा म्याक रिलीज गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, एप्पलले तपाईंलाई एप्पल टिभी + को एक बर्षको सदस्यता दिन्छ। समस्या यो हो कि यदि तपाईंले पहिले यी उपकरणहरू मध्ये एउटा खरीद गरिसक्नु भएको छ र तपाईंले पहिले नै प्रचारको आनन्द लिइरहनुभएको छ भने, तपाईं नयाँ खरीदको साथ यसलाई एक बर्ष बढाउन सक्नुहुन्न.
त्यसोभए मेरो विशेष अवस्थामा मैले पहिलो आईप्याड शुरू गरे नयाँ एप्पल आईडी सिर्जना गरेर। एकचोटि कन्फिगर भएपछि, म यसको साथ एप्पल टिभी + प्रवेश गरे र सित्तैको लागि सक्रिय गर्न विकल्प देखा पर्‍यो। मैले त्यसो गरें, र यसको लागि कुर्दै थिएँ मेल द्वारा पुष्टिकरण एप्पल बाट
र यो सकियो। मैले आईप्याड पुनःस्थापित गरें र मैले यो मेरी श्रीमतीलाई दिएँ ताकि त्यो पहिले नै पुरानो आईप्याडबाट डाटा पास गरेर यसलाई कन्फिगर गर्न सक्दछ। मैले भर्खर एप्पल टिभीलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्‍यो र नयाँ एप्पल आईडीको साथ यसलाई सक्रिय गर्नुपर्‍यो, र बैठक कोठाको टिभीको अनुप्रयोग परिवर्तन गर्नुपर्‍यो।
अबदेखि, मसँग "परिवारको रूपमा" उपकरणहरूमा पदोन्नति यस वर्षको जुलाईमा अन्त्य हुनेछ, तर भान्साकोठा र बैठक कोठामा यस चालको लागि धन्यवाद फेब्रुअरी २०२२ सम्म मसँग छ। धन्यवाद, जीनियस.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » यस ट्रिकको साथ एप्पल टिभीको निःशुल्क वर्षको हालको पदोन्नतिको फाइदा लिनुहोस्
र यदि तपाईंले परिवारमा त्यो नयाँ आईडी थप्नुभयो भने, के तपाईंसँग सबैका लागि वर्ष निःशुल्क हुँदैन?
ठिक छ, के खराब ट्रिक हो, नयाँ एप्पलिड सिर्जना गर्नुहोस् र नयाँ कम्प्युटरमा कन्फिगर गर्नुहोस्।